US inokwezva vashanyi ine mari inodhura kwazvo yekupaka
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » US inokwezva vashanyi ine mari inodhura kwazvo yekupaka
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kumhanyisa Mota • tsika nemagariro • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Shopping • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Kupaka munzvimbo dzakawanda dzekuUS kunogona kupedzisira kwadhura vashanyi zvakanyanya kupfuura zvaitarisirwa.
Pakuronga rwendo rwekufamba nenyika tinofunga nezvepeturu, mahotera, chikafu, zviyeuchidzo…asi dzimwe nguva zviri nyore kukanganwa mari inodhura.
Kunyangwe iwe uri pazororo kunze kwenyika kana pazororo padyo nekumba, mitengo inogona kuwedzera nekukurumidza. Usati wazviona, unogona kupedzisira washandisa mazana emadhora pamari yekushamisika senge matikiti ekufambisa, kutarisa mukwende, uye kupaka mota yako.
Kutyaira muUSA ndiyo imwe yedzakareruka nzira dzekufamba munzira uye kutenderera.
Nekudaro, inogona kudhura kupfuura iwe yaunotarisira kupaka pane dzimwe dzepamusoro dzeStates.
Nyanzvi dzekufambisa dzakaisa pamwechete rondedzero yezvakachipa, zvinodhura zvakanyanya, uye zvemahara zvinokwezva mota mapaki, zvichiratidza kuti ndezvipi zviri nyore zvekukwezva vashanyi.
Nzvimbo dzekupaka dzinodhura zvakanyanya dzekuUS
chinzvimbo udo Parking Price
1 Iyo Metropolitan Museum yeArt $50.00
7 Iyo Getty Center $20.00
9 Iyo Yakafara $17.00
11 Natural History Museum yeLos Angeles County $15.00
Ndira 14, 2022 pa23: 53
Zviri paawa here kana paawa?